Wayne's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Blog Posts (27)Discussions (1346)EventsGroups (34) Wayne's Likes Wayne's Friends
CMS (Wordpress, Joomla..…
Repost : Did you see this messages "Warning - visiting this web site may harm your computer! " ?
Started Oct 8, 2012 Repost
Started Jun 5, 2012 [ Moved ] Skype Credit Sale
Started this discussion. Last reply by Phyu Sin Kyaw May 31, 2012. View All
Saw Nerdar replied to Wayne's discussion MMGamers 2.0"awesome!"Nov 20kyaw soe thu replied to Wayne's discussion MMGamers 2.0"4 am က General "Command and Conquer Generals" ေလး၀ယ္ခ်င္ပါတယ္ဘလိုဆက္သြယ္လို့ရမလဲသိခ်င္ပါတယ္။"Oct 5ေကာင္းေကာင္း commented on Wayne's group PC Games Fans"MAFIA II & Joe's Adventure.EXp are also good in 3rd person Shooting game.
Assassin Creed III is good. But not official , cannot play new maps.
Sniper I,II and Sniper Elite V2 are very nice. When the bullet hit the target, show inner Body…"Sep 29ေကာင္းေကာင္း joined Wayne's groupPC Games FansHi guys! I change the title of the group to PC Games Fans whoever love to play PC Games please join our group.Please do discussions here (game development, cheat ,latest news, how to play etc)Sep 29 24
mmmoe joined Wayne's groupPC Games FansHi guys! I change the title of the group to PC Games Fans whoever love to play PC Games please join our group.Please do discussions here (game development, cheat ,latest news, how to play etc)Sep524
aung phyo wai joined Wayne's groupPC Games FansHi guys! I change the title of the group to PC Games Fans whoever love to play PC Games please join our group.Please do discussions here (game development, cheat ,latest news, how to play etc)May 10 24
Wayne replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ္ ထမိန္႐ုတ္ hacker"ကိုခ်စ္ရွင္းေပးပါ။ ကြ်န္ေတာ္နိင္တဲ့ ကိစၥဟုတ္ေတာ့ဘူး ^_^"Jan 25deep joined Wayne's groupDebates & Complainsျမန္မာအုိင္တီပရုိ အား လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားမူ တုိးပြားလာေစရန္နင့္ မိမိတုိ.၏ မေၾကနပ္ခ်က္မ်ား အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား တေနရာတည္းစုစည္းႏုိင္ရန္ ရွိသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး debates မ်ားကုိ ဤေနရာတြင္လုပ္ေပးၾကပါရန္ ....Jan 23 0
Creator(mmgamers.com,portalmyanmar.com) မီဒီယာအား လက်နက်သဖွယ် ထိရောက်စွာအသုံးပြုနေသည် ။ ဂိမ်းဆော့နေသည် ။
Yangon Univeristy, YUFL, Dagon Univeristy, Gusto,YOMA, KMD
M.Sc(Computer Science),B.A(English)YUFL,Final Year,BSc.Engineering IT/EC(DD), Diploma In IT, Diploma In EC , Diploma In Hardware Engineering ၊ ဂိမ်း reivew တစ်ပတ် ၈ခုရေသည် ။ animation reivew များနင့် Drupal ဖြင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များရေးနေသည် ။
Become our fans in Facebook Wayne's Blog
အင်တာနက် ကွန်မြူနီတီနဲ့ ဆိုင်ဘာဘူလီ
Posted on October 21, 2011 at 2:27pm5Comments
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ လေ့လာမူစစ်တမ်းတစ်ခု ပြုခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒါကတော့ ကလေးတွေကို အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ ကလေးကြီးတွေကို သုတေသနပြုခဲ့တာပါ ။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ အဲဒီအနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ ကလေးတွေဟာ အဆင်မပြေတဲ့ မိသားစုက ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာပါပဲ ။ မိဘကကွဲနေတာတွေ ၊ အဆင်မပြေတဲ့ မိသားစုက လာတာတွေ ၊ မိစုံ ဖစုံမဟုတ်ပဲ တစ်ဦးတည်း(single parent) က လူတွေဖြစ်နေတာကို တွေ့ရှိရတာပါ ။ ပြောရရင်တော့ ချစ်ခြင်းကောင်းကောင်း မခံရတဲ့ ကလေးတွေပေါ့ ။
ဒီနေရာမှာ ကျွှန်တော် ဆိုလိုချင်တာက မိဘမဲ့ ၊…
Continue Freelance Developer တကယ်လုပ်တော့မှာလား?
Posted on September 11, 2011 at 2:28am 1 Comment
ကျွှန်တော်ကိုယ်တိုင်က လွတ်လပ်တာကြိုက်ပါတယ် ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်ချင်တယ် အလုပ်ချိန်မှာလုပ်ပြီး နားချိန်မှာနားချင်တယ် ။ Company တွေရဲ့ အတွင်းရေ:အရှုပ်အထွေ:တွေမှာ မပတ်သက်ချင်ဘူး ။ လူဘဝရှိတဲ့ ခဏမှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကိုအကောင်အထည် ဖော်ချင်တယ် ။ မိဘရဲ့ ပိုက်ဆံကို လက်ဖြန့်မတောင်းချင်ဘူး အဲဒါတွေကြောင့်လုပ်ဖြစ်တာပါ ။ ကျွှန်တော့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ နည်းနည်းဗဟုသုတရအောင်ပြောချင်ပါတယ် ။
အသက် ၂၃နစ်အောက်ဆိုရင် Freelanceလုပ်ပါလို.… Continue Ways to becomeadrupaler (part -1)
Posted on August 21, 2011 at 1:19am2Comments
ဒီဆောင်ပါးကို မဖတ်ခင် သင်ဟာ
၁။ HTML, CSS ကို နောကျေနေအောင်သိရပါမယ် ။ ၂။ FTP concepts တွေကို နားလည်ပြီးသားဖြစ်ရပါမယ် ။ ၃။ Wordpress သို.မဟုတ် Joomla အစရှိတဲ့ CMS တွေကို အနည်းဆုံး တစ်နစ် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လေ့လာ အသုံးပြုပြီးတဲ့သူဖြစ်ရပါမယ် ။
Drupal ဟာ ဒီမှာ အသုံးများတဲ့ wordpress နဲ့ joomla လိုပဲ CMS (content management system) တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Wordpress နဲ့ Joomla… Continue အိုင်တီလေ့လာသူတိုင်းအတွက် Software Engineering
Posted on August 2, 2011 at 3:00pm 8 Comments
ဒီဆောင်:ပါးဟာ Ivan Summerville ရေးခဲ့တဲ့ Software Engineering စာအုပ်နဲ့ စာရေးသူရဲ့ အတွေ့အကြုံ ၊ ဆရာသမားများစီက သင်ကြားပို.ချမှုတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီးရေ:ထားတာဖြစ်ပါတယ် ။တိုးတက်တဲ့ တိုင်းပြည်တိုင်းရဲ့ စနစ်တွေအားလုံးနီးပါ ဟာ software Driven (software နဲ့ ထိန်းချုပ်) တဲ့ စနစ်တွေဖြစ်နေပါပြီ ။ ကားလက်မှတ်ကနေ ၊ ဗီဇာ အဆုံး ၊ ဒုံးပျံလွတ်တာအထိပါ အသုံးပြုနေကြပါပြီ ။
လောလောဆယ် ကျွှန်တော်တို.တိုင်းပြည်မှာ လုပ်အားခက ဆော့ဝဲတွေထက် ပေါပေါများများရနေပေမယ့် နောင်မကြာတော့မယ့် အနာဂတ်မှာ အလွဲမရှောင်သာ… Continue Linux ကို ဘာအတွက်သုံးကြမှာလဲ
Posted on December 31, 2010 at 9:34am 31 Comments
Internet ခေတ်ကြီးမှာ computer user တစ်ယောက်အတွက် ဘာတွေလိုနိုင်မလဲBasic Requirement (အကြမ်းအားဖြင့်)၁။ Calculator၂။ Notepad၃။ Office(Word, Excel,PowerPoint)၄။ web browser (Firefox,IE, Orca,Opera,Safari etc)၅။G talk Client၆။ zipping/unzipping tool၇။ LAN and Internet Connection၈။ Video ,audio player၉။ Paint or photo-shop ဒီလောက်ဆို… Continue AddaBlog Post
At 2:04am on January 17, 2013, Julianna said… thanks for accept my friendship, I will be very happy, If you can get back to me, through my e-mail. juliana4love_vaye@yahoo.com So we can get to know each other better, and i well give you my pictures and also tell you more about me OK, Beside i have something special i want to discuses with you. IS ALL ABOUT ME PLEASE. I find it difficult to express myself here, since it'sapublic site, Please I will be very happy, if you can send meamessage on my email: juliana4love_vaye@yahoo.comRegardJuliana! At 1:04am on November 13, 2011, yong ae lynn said… ဘာလို႕ဘေလာ့မေရးတာလဲဆိုရင္ ဘေလာ့ေတြမွာကြန္မက္မေပးရင္
ေနႏို္င္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ကြန္မက္တစ္ခ်ိဳ႕က လူကိုတိုက္ရိုက္ေစာ္ကားေနသလိုျဖစ္
က်ေေနာ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပါဘဲ ေက်းဇူးးတင္လွ်က္ေယာင္အဲလင္း .....
At 7:13pm on July 13, 2011, Thanyawzinmin said… visiting ur file At 8:17pm on February 6, 2011, Myint Kyaw Thu said… Bruce Wayne gyi par lar At 11:42am on November 14, 2010, Myint Kyaw Thu said… So many thanks bro :D At 1:46am on October 9, 2010, HMNaung said… hey wayne! nice to see you here. :D At 7:09pm on October 2, 2010, ေအာင္မိုး(MySM) said… လာလည္သြားပါတယ္ သူငယ္ခ်င္းေရ ... ကၽြန္ေတာ့ရဲ ့ေရႊျမန္မာဥယ်ာဥ္ ကိုလည္း ျပန္လာလည္ဖို့ဖိတ္ေခၚပါတယ္
At 3:16pm on September 20, 2010, Myint Kyaw Thu said… သူက်တင္ခ်င္တဲ့ msg တင္တယ္၊ နာ့ msg က်ဖ်က္သြားတယ္။ မတရားဘူး၊ သူႀကီးကိုခ်စ္ ကယ္ပါ! At 2:02pm on August 22, 2010, Min Thiha Zaw said… အစ္ကို
ကိုျမင့္ေက်ာ္သူဆီက Flash Game Tutorials ေတြကိုျမန္ျမန္သြားယူဗ်ာ။
ျပီး၇င္ျမန္ျမန္တင္ေပး။ ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္ေနတာၾကာျပီ.. :D At 4:39pm on April 20, 2010, Aung Aung said… လက္ကားတယ္ဆိုတာ တားထားတာ
ေတာ္ၾကာ မျမင္မစမ္းနဲ႔ တိုက္မိမွာ စိုးလို႔ ဟဲ ဟဲ
အထူးသျဖင့္ မ်က္မွန္မည္း တပ္တဲ့သူေတြေပါ့ :P No comments yet!
devillove replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်14 hours agopeepaw replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်yesterdayNga_Pyort replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်MondayLIquid@crystal replied to peepaw's discussion Monitoring Software ေကာင္းေကာင္းေလးမ်ားသိၾကပါလားဗ်Fridaypyiphyomgmgsoe updated their profileNov 26pyiphyomgmgsoe leftacomment for thinnNov 26pyiphyomgmgsoe replied to pyiphyomgmgsoe's discussion Free SIP for Testing ! ! !Nov 26pyiphyomgmgsoe replied to Aung Myo Htet's discussion About CiscoNov 26Bijamon liked Chaw Chaw kg lay's blog post အဂၤလိပ္စာေလ့လာလိုသူေတြအတြက္ (ျမန္မာလို)စာအုပ္ေတြေဒါင္းလုပ္လုပ္မယ္ (ဦးေအာင္ဟိန္းေက်ာ္၊ဦးသိန္းလြင္၊ေရႊမင္း၀န္ဦးဘုန္း.....)Nov 25Bijamon shared Chaw Chaw kg lay's discussion on Facebookၿမန္မာ Data Traveller ဆိုက္ေလးNov 25Bijamon shared Chaw Chaw kg lay's discussion on Facebookၿမန္မာ Data Traveller ဆိုက္ေလးNov 23Hsatpaing joined Shwe Thaik's groupMyanmar WebsitesNov 22 11